Nkwupụta Twitter #Blacktober Anime Fanart bụ onye agbụrụ nke ndị Japan (esemokwu) - Ndị Ọzọ
Nkwupụta Twitter #Blacktober Anime Fanart bụ onye agbụrụ nke ndị Japan (esemokwu)
Ọktoba bụ ọnwa ọdịnala ojii. Ma n'ihi ihe ụfọdụ, “ojii” ọkọkpọhi ọtụtụ ndị trigg.
Ọbụghị naanị SJW’S, ma karie onye ọ bụla ọzọ - ndị na-akpa ókè agbụrụ ndị kpọrọ asị ịhụ ihe ọ bụla dị mma metụtara ọdịbendị ojii.
Enweghị ebe dịka Twitter mgbe ọ bịara ịmepụta esemokwu site na obere ikuku gbasara ihe ndị ahụ ekwesịghị na-arụrịta ụka.
Greatfọdụ nnukwu badass ojii anime odide na ọ dịghị onye na-ekere òkè #iheanacho na-eme ihe obula. Mana Gaa n'ihu, echere m na anyị chọrọ deku nke ise taa. pic.twitter.com/uiljlPCdg8
- Joestradamus & # x1f1fb; & # x1f1ea; ⚤ & # x1f51e; (@Nwanyi_ocha) Ọnwa Iri 18, 2020
Were nke a Tweet dị ka ihe atụ na #Blacktober - hashtag na-eme ihe odide ojii na anime, ihe nkiri, ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ.
Offọdụ nzaghachi na Tweet a bụ ara. Agaghị m ekerịta ya ebe a, ị nwere ike ịkọrịrị ihe ọ pụtara.
Otu akụkụ nke #blacktober na-ewerekwa ihe odide ndị dị adị, wee nwee ndị na-ese ihe na-emegharị ya ma tinye 'ntụgharị' na ya.
Na nke a pụtara ịhụ ihe ọ ga - adị ka ọ bụrụ na ị ga - asị, Efere emeputara dika agwa ojii.
Ma ọ bụ Nezuko ma ọ bụ Senku dọtara dị ka odide ojii kama.
Ebumnuche bụ n'ihi na enweghị ọtụtụ odide ojii na anime ka o siri kwụrụ. Ya mere, ọ bụ ohere iji hụ ihe nke ahụ ga-adị.
Nseta ihuenyo redraws maka #iheanacho !!! & # x1f496; & # x1f496; & # x1f496; pic.twitter.com/NEVNFxQuat
SpookyJay & # x1f383; (@Ogheneruemu) Ọnwa Iri 6, 2020
#iheanacho anime edit # 8: Senku pic.twitter.com/Emo7RSNwvb
- Jaden: CEO nke Senku Defender's | #Ogbako (@Oluchi ibea) Ọnwa Iri 8, 2020
na-esote maka #iheanacho anyị nwere #Nezuko site na #DemonSlayer & # x1f495; pic.twitter.com/CyYwY1Ok5p
- JVZMINA X Art (@jvzmina) Ọnwa Iri 13, 2020
A na-azọrọ ugbu a na otu ihe omume na-atọ ọchị bụ “ịkpa ókè agbụrụ” nye ndị Japan
Shouldkwesịrị ịkwụsị ịkpa ókè na Japanese site na ịme ihe odide anime ojii ugbu a. Ọ naghị enwe nkwanye ùgwù maka nke mbụ. Ndị Japan bụ ndị Eshia, na POC. Echere m na ịsacha oji na nke ọcha abụghị nsogbu mana achọghị m iji maka ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị. #iheanacho
- ụgbọ elu (@shelrinss) Ọnwa Iri 10, 2020
Ndị mmadụ na-ekere òkè na #iheanacho kwesiri ịmara na ha bụ ịkpa oke agbụrụ megide ndị Japan.
Dịka ọmụmaatụ, na nke a tweet, a na-eji oji dochie Deku.
Anyị ndị Japan na-eche na ọ bụ nchara nchara.
Ọ bụ izu ohi njirimara nke ndị Japan anime. https://t.co/25ysvBkeLV
- enyemaka (@aid_exex) Ọnwa Iri 12, 2020
“Blacktober bụ ịkpa ókè agbụrụ ka ọ bụ? Kedu ihe dị iche na ncha ọcha? ' https://t.co/W9YsDFLQkK
M sụgharịrị ụfọdụ ihe na ya.
Ọ na-ekwu 172 mana m dị umengwụ ịtụgharị ya niile. pic.twitter.com/fiGQ1St0bB
- Seriema & # x1f51e; (@ seri3ma) Ọnwa Iri 13, 2020
Ihe na-adọrọ mmasị banyere ihe ndị a bụ ndị America mgbe niile, na Tweeters n'onwe ya, 'ndị ọcha na-asacha' Japanese.
Onweghi onye na-eme mkpesa ma ọ bụ kpasuo iwe ma ọ bụ mepụta esemokwu sitere na ya.
I kwesiri iju onwe gi ihe kpatara ya, obu ezie na ihe kpatara ya bu ikwuputa.
Anime Fans na-eme mkpesa
bc blacktober bụ naanị banyere redrawing anime odide ka mma mata dị ka ha & ike na-atọ ụtọ fanart maka October. Ebee ka ịcha ọcha bụ ihe nhichapụ nke ihe odide POC edere site na ịse ndị omee ọcha ka ha kpọọ ha & wepu ihe ngosi POC dị ntakịrị
Onyedikachukwu (@okechichukwu) Ọnwa Iri 9, 2020
“Blacktober bụ naanị banyere redrawing anime odide ka mma mata dị ka ha & ike na-atọ ụtọ fanart maka October. Ebe dị ka ịcha ọcha bụ usoro nchicha nke ihe odide POC edere na mbụ site na ịse ndị na-eme ihe nkiri ọcha iji kpọọ ha & kpochapụ ihe ngosi POC dị ntakịrị. '
Nke a bụ ihe #blacktober dị na mkpụmkpụ, ruo mgbe ndị ọchịagha Twitter mere ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma.
Agaghị m eziga nke a na isi mana nke a bụ otu ihe kpatara na agaghị m eme blacktober ọzọ.
DONGW SGH S ND THIS A,
Blacktober mara mma nke ukwuu ịhụ ndị dị ka m na franchises niile kachasị amasị m mana ọ na-esiri ike ịhụ ka ndị enyi m na-akpagbu. pic.twitter.com/MQaDZkamZB
- & # x1f496; GaySpace nwoke nwere mmasị nwoke unit-23 ☾ & # x1f496; (@NgbedeEzigbo) Ọnwa Iri 9, 2020
Webs si ebe a na-ewe iwe na redaws na fan art maka #iheanacho bụ otu ndị na-ahụ maka ịkpa ókè agbụrụ na-asị na ndị ojii enweghị ike ịkọ colay ọcha mkpụrụedemede anime.
- C (@nke_ebuka) Ọnwa Iri 11, 2020
I nweghi ike ile ihe nlere dika Attack na Titan ma tie nkpu na ndi mmadu na eme blacktober ka ha 'kwusi ime anime ndọrọ ndọrọ ọchịchị !!' mgbe usoro mmiri ozuzo dum bụ WWII fanfiction.
o bukwa mmadu na agba akpụkpọ ya abụghị usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị yabụ enwere ike imechi ya
- M chetara ọnọdụ a; (@ogechii) Ọnwa Iri 10, 2020
Anime twitter na ọgụ ha na-eme maka njiri oji na-enye m nnukwu mbibi ụbụrụ dị n'ime
- & # x1f375; Abụ m Elly & # x1f375; (@ onyi19) Ọnwa Iri 11, 2020
arụmụka bụ na ọ bụ ịkpa ókè agbụrụ ka blackwash na-abụghị Black anime odide, ma echere m na nke ahụ bụ bullshit lmao. Anime nwere akuko banyere (mgbe ufodu di oke egwu) na-ghahie ndi oji Black, Blacktober bu kwa ndi omenkà nwere ohere ile anya nnochite nke ha enyeghi ego
Sage (@egha_egha) Ọnwa Iri 11, 2020
“Arụmụka bụ na ọ bụ ịkpa ókè agbụrụ ka blackwash na-abụghị Black anime odide, ma m chere na nke ahụ bụ bullshit lmao. Anime nwere akuko banyere (mgbe ufodu nke jọgburu onwe ya) ịgha ụgha ndị ojii, na Blacktober bụ ohere ndị na-ese ihe iji hụpụta nnọchite anya na ha enweghị ego. ”
Gịnị kpatara anyị ji lekwasị anya nke ukwuu na 'agbụrụ'?
Nke a bụ n'ezie US Twitter. Otutu okwu a na-esite ebe ahu, O di ole na ole si Japan UK, ma obu obodo ndi ozo.
Ilekwasị anya na agbụrụ, na ịme nsogbu site na obere ikuku bụ n'onwe ya akpa ókè agbụrụ. N'ihi na nke ahụ bụ ihe mbụ ị hụrụ: agba.
Ihe omume a yiri nke #sailormoonredraw
akwọ ụgbọ mmiri ọnwa redraw Asia àgwà
ọkwọ ụgbọ mmiri ọnwa redraw nwa agbọghọ
Ọnwa ole na ole gara aga, ma eleghị anya na July 2020 - #sailormoonredraw ghọrọ onye esemokwu.
Ọ bụ ọzọ US Twitter onye wuru n'ihi na ndị odide abụghị 'ọcha' ezuru. Na katọrọ ndị Japanese na Black redrawing’s nke odide.
O yiri ka Twitter nwere nsogbu na akpa ókè agbụrụ, na obodo anime na-akpalite ụfọdụ ihe nzuzu mgbe ọ na-adịghị mkpa ịnọ ebe ahụ.
7 Ofdị Fans nke Na-eme Ka Anime Community TOXIC
The Non Kwụsị ịkpa ókè agbụrụ Against Black Anime Cosplayers, na “Influrs” Staynọ jụụ Dị ka ọ na-adịkarị
ndepụta anime kacha elu na oge niile
elu iri iberibe ndụ Anime
kedu ihe kacha mma anime ebi